Movies Laba waji yihiin qarnigii si 19aad. Si dhab ahaantii sameeyo aragti ah, waxa la joogaa wakhtigii si ay u abuuraan 3D. Laakiin waxa haddii aad leedahay wax badan oo shot video in 2D mar hore, oo aadan awoodi karin qiimaha a 3D video camera? Ma aha in welwelin, waxaa jira qaar ka mid ah 2D weyn barnaamijyada Converter 3D diyaar u download ama gadashada. Bal aan eegno toban ugu fiican.
Cyberlink si fiican u yaqaan sida shirkadda ciyaaryahan DVD iyo software qabashada screen jecel ee adduunka ee. Hadda shirkadda uu leeyahay version ah oo ay software in isticmaalaan waxa loogu yeero Tiyaatarka True 3D. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala si loo badbaadiyo filimada qaabab la jaan qaada koob 3D, kala fog TV'yada, iyo 3D iyo 3D diyaar telefishin. Waxa uu awood u leeyahay in la ogaado ilaha haddii aad leedahay aad TV xiran, ama inaad la qabsato karaan goobaha ay si loogu badalo disc ah in loo maqli karo inta lagu jiro 3D on your computer in waqtiga dhabta ah. Ma doonaysaa in aad u aragto filimada ee Blu-Ray 3D? PowerDVD 14 Ultra upconvert kartaa filimada in Blu-Ray qalabka socon.
8. Roxio CinePlayer la 3D
Haddii aad u jecel filimada 3D, Roxio yahay barnaamijka aad u. Barnaamijkan upconvert karaa 2D in 3D ah ee loo maqli on 3D TV'yada, kormeerayaasha computer touchscreen, kormeerayaasha LCD kala fog, iyo koob NVIDIA 3D. Waxaa la shaqeeyaa kala duwan ee kaararka video iyo qaab computer oo u ciyaara filimada 3D iyo Blu-Ray saxanno, sidoo kale. CinePlayer awood u taabato beddelaad waqtiga dhabta ah. Waxaad heli kartaa qaababka bonus, dhaxgalka, iyo, haddii ay ku xiran internetka, muuqaalada online, sidoo kale. Video loo maqli karo waa nadiif ah oo kuwan raadkaygay audio leeyahay cod weyn. Waxaad gali kartaa adiga kuu gaar ah videos sidoo. Screen ugu weyn waa u fududahay in ay maraan oo ay isticmaalaan.
TotalMedia waa software loo maqli ah iyo sidoo kale 2D ah in 3D video Converter. Waxaa ka ciyaari kara Blu-Ray saxanno, oo upconverts tiro ka mid ah qaababka ay u 3D. Hadda waxaa jira wax badan oo ka mid ah kormeerayaasha computer iyo telefishin in ciyaari 3D, laakiin ciyaaryahan walba video aan awood u bandhigeen 3D si sax ah u qaadan. TotalMedia taageertaa kala fog screens LCD 3D, HDTVs 3D-diyaar, NVIDIA 3D Vision, iyo kormeerayaasha AMD. Haddii aanad haysan mid ka mid ah, ha ka welwelin, sida software this, iyadana la anaglyph muraayadaha casaan iyo buluug, muujiyaan karaa 3D ilaaliye 2D. Waxa kale oo aad toggle karaa inta u dhaxaysa 2D iyo 3D inta lagu guda jiro loo maqli karo.
Barnaamijkan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameeyo si ka badan in 3D ka badan daawado filimada. Waxaa ka shaqeeya sidii 2D ah in 3D video Converter u tiro ka mid ah telefishinada iyo kormeerayaasha. Xataa haddii aadan haysan bandhigay 3D ah, la koob laba-midabka, weli waxaad daawan kartaa filim ku 3D. Plus, aad haatan kulan kartaa 3D. Taasi waa xaq! Qaar ka mid ah kulan ee adduunka ee ugu caansan sida Call of Duty iyo Sims waa in laga helaa 3D. Ma rabtaa inaad aragto adduunka ee 3D? Waxaad la TriDef awooddo, sababta oo ah waxa lagu daro Google Earth. Yarey in aad guriga iyo arko jeclaan kaliya aad lahaa haddii uu diyaarad drone ah ama.
Sida magacaba ka muuqata, barnaamijkan waxaa loogu talagalay in la go-in 2D in 3D video Converter. Waxaa loo isticmaali karaa si isku mid ah ay takhasuska ah ama amateurs bukaanka. Waxa ay taageertaa qaabab kala duwan, oo ay ku jiraan .mp4 iyo wmv, oo awood u leh inay gubi in disc for loo maqli karo TV-ga ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa aanu u taageeraan ma Qalabka telefoonada gacanta. Waa software degdeg ah si aad u dhaqso ah oo hufan dhameysan kartaa beddelaad aad. Waxaad awoodi kartaa in ay doortaan track maqal ah haddii aad ka shaqeeya samaynta kuu gaar ah videos. Waxaad dooran kartaa sida loo waafajiyo 3D qalabka kala duwan oo ka mida shantii qaab ee la heli karo, oo ay ku jiraan anaglyph yaqaan, ama style buluug iyo casaan.
Sida magacaba ka muuqata, tani waa aalad diinta u filimada gurigaaga ama lagala soo bixi videos ah. Waxaa la iman version tijaabo ah si aad u qaadato kartaa wadid tijaabo ah oo loo arko haddii aad u rabto ama aan. Waxaa u shaqeeya kombiyuutarada Windows XP iyo ka cusub. Doorashadaada kaliya ee wax soo saarka waa anaglyph (bicolor, sida caadiga ah casaan iyo buluug) 3D. Waxay leedahay user-friendly interface a - kaliya dooro video ama gabal aad rabto in aad si loogu badalo iyo Ramka sameeya inteeda kale. Waxaad u badbaadin karaa qaabab kala duwan oo ay ku jiraan .mp4, wmv, iyo AVI, oo lagu daray waxa ay la jaan qaada RealMedia iyo QuickTime.
Tani 2D in 3D video Converter shaqaysaa wax yar ka duwan barnaamijyada ugu. Barnaamijyo Old dugsiga uu noqon doono oo aqoon u leh qaab qoraal ku salaysan tan furan il software isticmaalaa. Laakiin ha la'aanta ah ee naqshadeynta aad Doqon - AviSynth waxaa ka buuxa muuqaalada u habaynta iyo nidaaminta video. Sababta oo ah waxa aanu u isticmaali gui, waxa aanu u baahan tahay in ay isticmaalaan wax files meel gaarka, si sixiddiisa la AviSynth waa degdeg ah. Qaabka Qoraalka ku salaysan waa u fududahay in ay maraan oo fudud si uu u barto. Users kartaa sida diirada u gaar ah si ay u abuuri karaan saamaynta gaar ah oo markaas iyaga nuqul wakhti kasta oo ah saxiixa video fiirin.
2. Axara 2D in 3D Converter
Barnaamijkan oo ay diinta 2D videos in qaab anaglyph 3D shaqeeyaa, ka dibna waxaa la badbaadin karaa in mid ka mid ah tiro ka mid ah qaabab video caadiga ah, oo ay ku jiraan DVD. Waxaad u baahan doontaa in ay koob buluug / casaan ama laba kale midabka si ay u arkaan sawirada 3D. Axara sidoo kale taageertaa kala duwan ee qalabka la qaadi karo, oo ay ku jiraan ciyaartoyda MP3 video-karti, iyo sidoo kale consoles'ka ciyaarta video. Waxaa kaloo loo isticmaali karaa sida caadiga ah editor 2D video, sidoo kale, in ay taageertaa Uploads in YouTube iyo vimeo. Axara ayaa sidoo kale si degdeg ah, oo u oggolaanaysa in beddelaad file badan waqti isku mid ah. Khariidad ee software-ka waa u fududahay in la isticmaalo iyo waxa daahirka ah si loo eego. Haddii aad diinta u gaar ah videos ama kuwa aad soo bixi, hab midkood, waxaad iyaga ka arki kartaa in 3D cajiib ah.
1. 4Media 2D in 3D Video Converter
Barnaamijkan wuxuu ka shaqeeyaa si loogu badalo filimada aad 2D in 3D isticmaalaya anaglyph ama stereoscope, oo aad reformat kartaa haddii aad monitor ama TV loo maqli karo waa nooc oo kala duwan, ama faqa 2D haddii baahidu timaaddo. Waa Converter ah xawaaraha hufan, laakiin qaar ka mid ah qaabab waa ka dhaqso badan dadka kale. U badbaadin karaa noocyada video ugu caansan Waxaad tahay iyo waxaad isticmaali kartaa qaabab ugu caamsan ee la gelin, sidoo kale. Waa la heli karaa afaf kala duwan, ay ka mid yihiin Shiinaha iyo English. 4Media oo keliya ka shaqeeya mashiinno Windows XP ka dhex Windows 7, oo ay khasaare kale waa waxa kaliya ee aad ku siinayaa saddex daqiiqo muddo maxkamad diinta ka dheer.
Dhibaatooyinka Dhignaashada Xalinta u iPhone
> Resource > Beddelaan > Sida loo badalo 2D in 3D la 3D Video Converter